Izindleko zedijithali ezibiza kakhulu kunazo zonke ngo-2021. Iyini imali ebiza kakhulu yedijithali?
Imali eyishumi ebiza kakhulu yedijithali ngokubiza kwezindleko zemali eyodwa ye-digital ku-US dollar (USD) okwamanje.
Idizadidi yedijithali ebiza kakhulu kunazo zonke 21/10/2021
Wrapped Bitcoin (WBTC) 61 907 $
Bitcoin (BITCOIN) 61 850 $
Bitcoin BEP2 (BTCB) 61 754 $
renBTC (RENBTC) 61 738 $
yearn.finance (YFI) 34 148 $
Ethereum (ETH) 3 793 $
Maker (MKR) 2 510 $
PAX Gold (PAXG) 1 775 $
Bitcoin Cash (BCH) 614.19 $
Binance Coin (BNB) 485.73 $
I-idijithali yemali ebiza kakhulu yinsizakalo ye-ptptoratesxe.com ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngenani eliphakeme lohlamvu lwemali olulodwa ezinyangeni ezi-3 ezedlule.
Insiza eku-inthanethi "i-idijithali yemali ebiza kakhulu" isebenzisa imithombo evulekile evela ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali futhi ihlanganisa isilinganiso sokheshi obiza kakhulu ngesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali ebizayo ibhekwa ngezindleko zohlamvu lwemali olulodwa. Kuyadingeka ukuhlukanisa inani lohlamvu lwemali kusuka ekuqongeleleni imali ye-idijithali yemali i.e. inani eliphelele lawo wonke ama-izimali zeDividenti akhishwe yile mali.
Inani eliphelele noma inkinga yazo zonke izinhlamvu zemali zikhonjiswa enye insiza yewebhusayithi Ikhamera ye-izimali zeDividenti yemakethe .
Uhlu lwama-izimali zeDividenti abiza kakhulu lushintsha njalo, ngoba ukuhweba nge-crypto kuyaqhubeka, futhi izinga lokushintshana le-idijithali yemali liyakhula noma liyawa.
Sebenzisa insiza "ebiza kakhulu" ye-inthanethi ku-inthanethi futhi mahhala.
Ama-cryptocurrensets abiza kakhulu namuhla 21/10/2021 imelelwa ngokukhethwa kwe-10 crypto ekuhleleni i-oda kusuka kokubiza kakhulu kuya kubiza kakhulu, ekwehlelweni kwenani lentengo.
Izindleko eziphakeme ze-crypto zethulwa ngamadola kalula ukuqhathanisa.
Ukulinganiswa kwama-cryptocurrensets abiza kakhulu kwethulwa namuhla 21/10/2021, kepha isilinganiso sibhekwa njalo.
Kuyacaca ukuthi kusasa kuzokwethulwa ama-cryptocurrensets abiza kakhulu asasa kusasa.
Vakashela iwebhusayithi yethu futhi usebenzise insiza yama-izimali zeDividenti abiza kakhulu namuhla.
I-idijithali yemali ebiza kakhulu ku- 2021
I-idijithali yemali ebiza kakhulu ye 2021 insiza yethu ye-inthanethi yamahhala ekhombisa ama-cryptocurrensets abiza kakhulu e 2021.
Ukukhethwa kwe-crypto ebizayo kuhamba ku- 2021, kepha sihlola izinyanga ezi-3 zokugcina zesilinganiso sokushintshana. Intengo namandla wereyithi ayaguquka nsuku zonke futhi ngenxa yalokho isilinganiso sethu esiphezulu "Ikhamera ye-izimali zeDividenti yemakethe 2021" ingashintsha nsuku zonke.
Ama-Izimali zeDividenti ngenani eliphakeme.
Ama-Izimali zeDividenti ngenani eliphakeme - isilinganiso sethu sokuhlola inani lezimali ze-idijithali yemali. Uhlamvu lwemali luyinto evamile yokubala. Kuyacaca ukuthi ungakhokha kanye nengxenye yezinhlamvu zemali.
Ngakho-ke, ukukalwa kwama-izimali zeDividenti ngenani eliphezulu kunemibandela ethile.
Ngokungeziwe kuzindleko ze-idijithali yemali, kufanelekile ukubheka inani lezinhlamvu zemali kanye nenkinga ephelele yezinhlamvu zemali kanye nesilinganiso sayo, i.e. idijithali yemali capitalization.
Izindleko ze-crypto zilinganiswa maqondana nedola laseMelika. Lokhu kukuvumela ukuthi uqhathanise ama-cryptos ahlukile ngamanani aphezulu ezinhlamvu zemali.
Ithebula lama-izimali zeDividenti abiza kakhulu.
Ithebula lama-izimali zeDividenti abiza kakhulu - kuboniswa ngokulinganisa isilinganiso sethu esiphezulu sama-cryptocurrensets abiza kakhulu.
Etafuleni le-crypto ebiza kakhulu ungabona igama le-idijithali yemali kanye nezinga lokushintshana kwalo ngamadola aseMelika.
Uma uchofoza enye yama-izimali zeDividenti abiza kakhulu etafuleni, uzoyiswa ekhasini lemininingwane elinemininingwane ngesilinganiso sale mali.
Ishadi elibiza kakhulu le-idijithali yemali.
Ishadi elibiza kakhulu le-idijithali yemali kungenye ithuluzi lamahhala online elibonisa amazinga aphezulu ama-cryptocurrensets abiza kakhulu.
Ishadi lama-cryptocurrensets abiza kakhulu abonisa izintengo zama-cryptos aphezulu ayi-10 enani eliphakeme kakhulu.